HomeBasic PhotographyRemote Shutter Release နဲ့ Delayed Shutter ဘယ်ဟာသုံးမလဲ?
Remote Shutter Release နဲ့ Delayed Shutter ဘယ်ဟာသုံးမလဲ?
အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြေးစားဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ရတာ အကုန်အကျအလွန်များတယ်ဆိုတာ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဆရာအများစုက ခရီးထွက်ဖို့ရယ် နောက်ဆုံးပေါ်နဲ့အကောင်းဆုံး ကင်မရာပစ္စည်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အမြဲတမ်း ဆန္ဒရှိပေမယ့် မတတ်နိုင်ပါဘူး။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေအတွက် ဒေါ်လာအနည်းငယ် ပိုသုံးဖို့လိုအပ်သလို ကင်မရာနဲ့ ကင်မရာပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူဖို့ ပါးနပ်စွာနဲ့ရွေးချယ်တဲ့ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် မလိုအပ်တဲ့ ကင်မရာနဲ့ ကင်မရာဆက်စပ် ပစ္စည်းတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အချို့ကိစ္စတွေက ကင်မရာထဲက လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့လည်း ပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာတော့ အပိုပစ္စည်းအဖြစ်ဝယ်ယူရတဲ့ Remote Shutter Release ကိုသုံးဖို့လိုလား ကင်မရာထဲမှာပါဝင်တဲ့ Delayed Timer ကိုပဲ သုံးရမလားဆိုတာ ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Landscape လို့ခေါ်တဲ့ ရှုမျှော်ခင်းဓာတ်ပုံပညာရပ်ကို လေ့လာလိုက်စားတဲ့အချိန်မှာ remote shutter တစ်ခုကို ဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသံကို သင့်အနေနဲ့ ထပ်ခါတလည်းလည်းကြားမိပါလိမ့်မယ်။ Remote shutter ကိုအဓိကဝယ်ယူရတဲ့အကြောင်းရင်းက ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာ ကင်မရာ တုန်ခါမှုကိုလျော့ချနိုင်သမျှလျော့ချပြီး ပိုမို ကောင်းမွန်ပြတ်သားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလိုချင်တယ်ဆိုတာ ပြောဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကင်မရာမှာ ၂ စက္ကန့်သို့မဟုတ် ၁၀ စက္ကန့်လောက် ထားလို့ရတဲ့ delay shutter (timer) ပါတယ်ဆိုတာ သင့်အနေနဲ့ သိဖို့လိုပြီး remote shutter ကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ကဲ အဲဒီအချက်တွေကြောင့် ကောင်းမွန် ပြတ်သားတဲ့ ပုံတွေရအောင်ရိုက်ကူးဖို့ remote shutter တကယ့်ကိုပဲလိုအပ်တာလား? Remote shutter နဲ့ delayed shutter တို့အကြားက အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Delayed Shutter သို့မဟုတ် ကင်မရာရဲ့ timer
ခေတ်ပေါ် ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာအများစုမှာ Delayed shutter စနစ်ဆိုတာ မဖြစ်မနေထည့်သွင်းထားပြီး စမတ်ဖုန်းတွေတောင်မှ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ရိုးရှင်းလှတဲ့ အသုံးအနှုံးလေးတစ်ခုပါဘဲ။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတာ သင်ရှပ်တာခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက် ကင်မရာကို စောင့်ခိုင်းပြီ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ကူးဖို့ အချက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက္ကန့်အနည်းငယ်ဆိုတဲ့အချိန်က ခင်ဗျားခလုပ်နှိပ်ပြီးချိန်မှာ ကင်မရာရှေ့ကို ပြေးသွားဖို့၊ ကင်မရာရဲ့ တုန်လှုပ်မှုကိုလျော့ချဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချိန်ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ထရိုင်ပေ့ါထ်အသုံးပြုပြီး ခင်ဗျား ရှပ်တာအနှေးနဲ့ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာ အလွန်အသုံးဝင်လှပါတယ်။ ခင်ဗျား shutter speed ကို စက္ကန့်ဝက်လောက်ချိန်ထားပြီး လက်နဲ့ကိုင်ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါ၊ ထွက်လာတဲ့ ပုံရိပ်ရဲ့ပြတ်သားမှုက ထရိုင်ပေါ့နဲ့ delayed shutter သုံးပြီးရိုက်ကူးတာလောက် မကောင်းဘူးဆိုတာသိလာပါလိမ့်မယ်။
Delayed Shutter ရဲ့အားသာချက်တွေ
ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာအများစုနဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ မဖြစ်မနေထည့်သွင်းထားတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုမိုပြတ်သားတဲ့ ပုံရိပ်တွေရအောင် ကင်မရာရဲ့ တုန်ခါမှုကို လျော့ချပေးပါတယ်။
Delay အချိန်ပမာဏကို အနည်းဆုံး ၂ မျိုးလာက် ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
ရှပ်တာခလုပ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ ကင်မရာရှေ့ကို ခင်ဗျားပြေးသွားပြီး ပုံစံပေးဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချိန်ရပါတယ်။
Delayed Shutter ရဲ့အားနည်းချက်တွေ
လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့ အရာတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးချိန်မှာ ချိန်သားကို ရိုက်ကူးဖို့ ခက်ခဲလွန်းတယ်။
အချို့ကင်မရာတွေမှာ ဒီစနစ်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ ဖော်ပြမထားဘူး။
Remote shutter ခလုတ်တွေက ပုံစံအမျိုးမျိုး ဒီဇိုင်းအမျိုးနဲ့ ဈေးအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ အချို့ တွေက သေးငယ်ပြီး ဈေးသက်သာတဲ့အချိန်မှာ အချို့ကတော့ ကြီးမားပြီး ပိုများတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ ဈေးလည်းကြီးပါတယ်။
သင့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ remote shutter release တစ်ခုကို မှန်ကန်အောင်ရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာ တခါတရံမှာတော့ အနည်းငယ် စိတ်ရှုပ်ရပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ remote shutter release လိုမျိုးကို သာမန်အနေအထားမှာအသုံးပြုချင်လို့ လိုချင်တာလား သို့မဟုတ် Bulb Lockup လိုမျိုး exposure အချိန်အကြာကြီးချိန်ထားလို့ရတဲ့ ဟာမျိုး လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါတဲ့ remote shutter release လိုချင်တာလား စသဖြင့် မေးခွန်းတွေထက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ခုနက မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေနိုင်ပြီးဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်သွားပါမယ်။ ကြိုးနဲ့စနစ်လား ကြိုးမဲ့စနစ်လား? ကျွန်တော့်အတွက်အဖြေကတော့ ကြိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကြိုးမဲ့ဖြစ်ဖြစ် အတူတူလောက်ပါပဲ သို့ပေမယ့် ခပ်လှမ်းလှမ်းက ရိုက်ကူးမှရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့ ကြိုးမဲ့ကိုသုံးဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
Remote Shutter Release ရဲ့အားသာချက်များ
ကင်မရာရဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးလို့ရအောင် ကြိုးမဲ့ Remote Shutter စနစ်က ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ပိုပြီးခေတ်မီတဲ့ အမျိုးအစားတွေမှာ interval timer လိုမျိုး အဆင့်မြင့်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။
ကင်မရာရဲ့ ရှပ်တာခလုပ်ကို အကြာကြီးဖိထားစရာမလိုဘဲ Bulb Mode ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
LCD နဲ့ timer ပါဝင်တဲ့ မော်ဒယ်အများစုက ဈေးကွက်ထဲမှာ လက်လှမ်းမီစွာရဲ့ ဝယ်ယူရနိုင်ပါပြီ။
သင်လိုချင်တဲ့ အချိန်ပမာဏ အတိအကျအတိုင်း ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
Remote Shutter Release ရဲ့အားနည်းချက်များ
သင့်အတွက် သင့်လျော်တဲ့ အမျိုးအစားတွေကို ရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲမယ်။
သေးငယ်တဲ့ ကြိုးတွေ၊ ကြိုးမဲ့ရှပ်တာခလုပ်လေးတွေက ပျောက်ဆုံးဖို့လွယ်ကူတယ်။
အရိုးသားဆုံးဝန်ခံရရင် စနစ်နှစ်မျိုးလုံးမှာ အားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် တစ်ခုက ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောဖို့ဆိုတာ ခက်ပါတယ်။
ရှုမျှော်ခင်းဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်အမြင်နဲ့ပြောရရင် ကျွန်တော်က remote shutter ကိုပဲအားကိုးနေရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမရိုက်ခင်မှာ ၂ စက္ကန့် ၃ စက္ကန့်လောက် ကျွန်တော်မစောင့်ခဲ့လို့ အချိန်ကောင်းတွေလွတ်သွားခဲ့တာ ကျွန်တော့်အတွက် အများကြီးပါ။ ပြေးနေတဲ့ရေလှိုင်းတွေကို ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ချိန်မှာ တိကျတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် remote shutter ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ အကယ်လို့များ ကျွန်တော်က တောအုပ်တစ်ခုထဲမှာ ရှိနေခဲ့ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေခြင်းမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ remote shutter ကို အသုံးပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အကယ်လို့များ ငြိမ်သက်နေတဲ့ ရှုမျှော်ခင်းတွေကို ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင် shutter speed က စက္ကန့်သုံးဆယ်ထက် ပိုပြီးကြာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိလို့ remote shutter ကိုဝယ်ယူဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ Shutter speed စက္ကန့် သုံးဆယ် ထက်ပိုခဲ့ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်တော့ remote shutter release ကိုဝယ်ယူပါလို့အကြံပေးလိုက်ပါရစေ။